Gadra afaka namerin-keloka Roa lahy voasambotra teny Analakely
Lehilahy 2 tamin’ireo dimy nitondra antsy sy basy teny Analakely no azon’ny polisy, taorian’ny fifanenjehana.
Nandritra ny famotorana azy ireo no fantatra fa gadra afaka izy ireo. Tamin’ny sabotsy teo no nitranga ny sakoroka. Nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika izy jiolahy 5 lahy ary efa nanodidina fianakaviana teratany vahiny. Nisy mpiantsena tsara sitrapo nahatsikaritra izany zava-maranitra sy basy izany ary nahita fa efa nanaraka ireto teratany vahiny ireo hatrany. Nampilaza ny polisin’Analakely ilay teratany Malagasy. Vao nahita ny polisy nanatona ireo olon-dratsy efa saika hanatanteraka ny asa ratsiny dia nirifatra nitsoaka. Ny roa tamin’ireo notanarahan’ny polisy no tratra.
Araka ny fanadihadiana lalina nifarimbonan’ny mpitandro filaminana mpanao famotorana sy ny mpanao gazety maromaro izay nanatanteraka “investigation”, fitafiana fitondra amin’ny fanatanjahantena (sary) no voalaza fa entin’ireo mpanendaka sy mpangarom-paosy. Saika henika azy ireo ny toerana mahavory olona amin’izao fety izao. Mampitaraina ny mpanara-baovao koa ireo mpamerin-keloka. Lazaina fa fanarenana ny fonja kanefa vao mainka sekoly ianaran’ireo jiolahy sy hanatevenanany ny fiofanany ary ifampizarany ny traikefa ho azy ireo. Tsy vitsy ireo jiolahy mpamerin-keloka no vao mainka lasa ratsy kokoa ny asany. Miandrandra fandraisana andraikitra amin’ireo manampahefana raha tena vonona hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny olom-pirenena.